Tsy misy pasipaoro COVID-19, tsy misy hidin-trano Krismasy ho an'i Great Britain
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Tsy misy pasipaoro COVID-19, tsy misy hidin-trano Krismasy ho an'i Great Britain
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Zon'olombelona • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Lehilahy nofonosina sainam-pirenena Danoa no nijoro teo amin'ny Kianja Amalienborg Palace, toerana nihiran'ny olona hanamarihana ny tsingerintaona faha-80 an'i Margrethe II, Mpanjakavavy Danoà, tany Copenhagen, ny 16 aprily 2020. - Afaka mihira manaraka ny lavarangana ny olona manerana ny firenena. , any an-jaridaina na any am-piasana. Nofoanana ny fankalazana ny tsingerintaona faha-80 an'i Queen Margrethe noho ny COVID-19, tahotra ny aretina coronavirus. (Saripikan'i Niels Christian Vilmann / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT (Saripikan'i NIELS CHRISTIAN VILMANN / Ritzau Scanpix / AFP avy amin'i Getty Images)
Ny minisitry ny fahasalamana britanika Sajid Javid dia nilaza tamin'ny mpampiantrano an'i Nick Nick Robinson fa taorian'ny fandinihana ny momba io raharaha io dia tsy nanantena mialoha ny hidin-trano intsony ny governemanta mandritra ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra - tsy toy ny tamin'ny taon-dasa izay nilazana ireo fianakaviana nanerana an'i Angletera hifanalavitra mandritra ny fialantsasatra. ary mankalazà saika.
Ny minisitry ny UK dia nanambara fa tsy misy pasipaoro COVID-19 ho an'ny Brits.
Tsy azo inoana ny fanidiana ny fialantsasatra amin'ny Krismasy any UK, hoy ny minisitra.
Ny 66% amin'ireo mponina ao UK dia vita vaksiny tanteraka ankehitriny.
Nandritra ny fisehoana omaly tamin'ny seho BBC dia nilaza ny minisitry ny fahasalamana UK Sajid Javid fa tsy hampiditra pasipaoro COVID-19 ny governemanta britanika ary “hahazo Krismasy” i Brits amin'ity taona ity.
Nilaza ny minisitry ny fahasalamana Javid tamin'ny mpampiantrano an'i Nick Nick Robinson fa taorian'ny fanadihadihana momba izany dia tsy nanantena mialoha ny hidin-trano intsony ny governemanta mandritra ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra - tsy toy ny tamin'ny taon-dasa izay nilazana ireo fianakaviana nanerana an'i Angletera hifanalavitra mandritra ny fialantsasatra ary hankalaza saika.
Nanambara i Javid fa “tsy niandry ny hidin-trano intsony” izy tamin'ny fararano sy ny ririnina, ary nilaza fa tsy afaka “mahita ny fomba hahatongavantsika amin'ny hidin-trano hafa.” Nanampy anefa ny minisitra fa "tsy tompon'andraikitra amin'ny minisitry ny fahasalamana manerantany ny manaisotra ny zava-drehetra eo ambony latabatra."
British Minisitry ny fahasalamana Nanambara ihany koa i Javid fa hanafoana ny drafitra fampidirany tokantrano ny governemanta Pasipaoro vaksiny COVID-19, farafaharatsiny mandritra izao fotoana izao.
“Tsy tokony hanao zavatra fotsiny isika mba hahasoa azy io na satria manao izany ny hafa,” hoy i Javid niady hevitra, nanamarika fa “ny ankamaroan'ny olona dia tsy tia ilay hevitra” hoe mila mampiseho antontan-taratasy mba hanao raharaha isan'andro.
"Ny azoko lazaina dia hoe efa nijery azy tsara isika, ary raha tokony hotehirizintsika ho toy ny safidy mety izany, faly aho milaza fa tsy handeha mialoha amin'ny drafitra momba ny pasipaoro fanaovana vaksinina izahay," hoy izy. .
Taorian'ny nanasongadinan'ny mpampiantrano BBC fa minisitra maromaro - ao anatin'izany ny minisitry ny vaksinin'ny COVID-19, Nadhim Zahawi - no nilaza vao andro vitsy lasa izay fa hampiharina pasipaoro vaksiny ato ho ato ary izany no zavatra tsara tokony hatao, nolavin'i Javid ny sosokevitra fa nisy ny fihodinana tany ho valin'ny solombavambahoaka mpiaro ny antoko Conservative Party mpanohitra sy ny fameperana.
"Firenena maro tamin'ny fotoana nampiharan'izy ireo izany dia ny manandrana manatsara ny tahan'ny vaksiny ary azonao ny antony mety nahavitan'izy ireo izany," hoy i Javid nanazava. “Tena nahomby tamin'ny tahan'ny vaksininay izahay hatreto.”
Misy olona 43.89 tapitrisa any Angletera vita vaksiny feno amin'ny COVID-19, raha 48 tapitrisa kosa no nahazo fatra farafaharatsiny, araka ny antontan'isa nomen'ny governemanta.
Raha ny angom-baovao farany, ny 66% amin'ny Angletera dia vita vaksiny tanteraka, ka nahatonga azy io ho firenena faha-17 vaksiny indrindra amin'ny ankapobeny.